मेयर र उपमेयरलाई ५१ केजीको माला लगाइदिएपछि…
परासी। १० वर्षअघि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासीका सुकुम्बासीहरुले सुनवल नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर थापा र उपमेयर दधिराम अर्याललाई ५१ केजीको माला लगाएर गाउँ घुमाएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०६९ सालदेखि रोक्का रहेको जग्गा मेयर थापाको पहलमा फुकुवा भएको भन्दै खुसी भएका वडा नं. ४ प्रगतिटोलका सुकुम्बासीहरुले बिहीबार उनीहरुलाई बाजागाजासहित स्वागत गरेर गाउँ घुमाएका हुन् ।
तत्कालिन सकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नवलपरासी समितिले पश्चिम नवलपरासीका करिब ८ हजार सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण गरेको थियो । सुनवल नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र करिब २३ सय बढी सकुम्बासीका जग्गा रोक्का थिए।
पुर्जा वितरणमा अनियमितता र भ्रष्टचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले सबै पुर्जाका जग्गा रोक्का राखेको थियो । आयोगको २०७८ कात्तिक ८ गतेको निर्णयले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय परासीलाई पत्रचार गरेको छ। पत्रचारपछि रोक्का जग्गा १ महिनाभित्र फुकुवा गरिने मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्यले बताए ।
जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले राजश्व दस्तुदर तोकेर पुर्जा वितरण गरेको थियो । राजश्व बुझाएर पुर्जा पाएका सुकुम्बासीहरु रोक्का भएपछि समस्यामा परेका थिए ।
बल्ल साइजमा आए सुवास नेम्वाङ, ओलीको आदेश मेरा लागी स्विकार्य छ भनेर कान समाते
उम्मेदवारीकाे पहिलो सूची सार्वजनिक, अब दाबी विरोधको समय सुरु!
बादल दोस्रोपटक ब्याटलमा, पूर्वमाओवादीको परीक्षा, को होला आउट ?
ओलीले भने, ‘अब त भयो सुवास जी ?’
जहाँ पूर्व माओवादी, त्यहीँ उम्मेदवारी : ओली